Umnqweno wokufanisa i-90x60x90 eyinqwenelekayo ihlala iphosa ukuba sinqabe imveliso efanelekileyo! Izidlo ezihlukeneyo kunye nezithintelo ezisisigxina zingakhokelela ekunqongopheni kwemida kunye nemithi emzimbeni. Ndikubonelela ngeemveliso ezininzi "ezinobungozi" ezinceda kakhulu umzimba wethu.
Uvuyo lwezinyo elimnandi, indlela yokuphakamisa imizwa kunye nokunciphisa uxinzelelo. Ukuba uphupha ukulahlekelwa isisindo kwaye ulahlekelwe iinqwelo ezizondayo kwisisu sakho, unakho ukukhupha i-tsholeta ekudleni kwakho. Kwaye akukho nto! I-tshokoleta iqulethe i-antioxidants ekhusela ukuguga kwesikhumba, ukunciphisa umngcipheko wokuphuhla izifo zentliziyo, umhlaza.
Abantu abaphosakeleyo abaninzi bacinga ukuba i-tshokoleta yintloko yesifo okanye intloko. Musa ukukholelwa! Ewe, ukuba kukho i-candy e-sweet tons, unobungozi bokufumana isifo sikashukela, isikhumba esibi njalo njalo. Kodwa sithetha ngokusetyenziswa kakubi kwecoleta.
Iingcebiso : khetha ithokoleta emnyama, ininzi enee-additives, idayisi, iziqhumiso kunye nezinye "i-chemistry". Ungadli i-chocolate. Khetha kuphela izinto eziphezulu zekhrolethi. Kwaye ivela kwi-marmalade, iipekese kunye neentlawulo kufuneka ziphetshwe.
Ubisi ngumthombo omkhulu we-calcium efunekayo ngumzimba wethu. Abantu abadala abadala banqabileyo ukugqiba ubisi, okanye, ngelixa besidla, abayiphuzi esi siselo esinempilo. Ukusetyenziswa rhoqo kobisi kunciphisa umngcipheko we-osteoporosis, kunceda ukulwa nobunzima obukhulu, ukunciphisa uxinzelelo lwegazi.
Iingcebiso : khetha i-fat fat fat, ineekhalori ezimbalwa, ezivela kuyo iipounds ezizondayo. Ukuba kunzima kuwe ukuba unike ubisi olunamafutha, uze uhambe kancane ukuya kwimveliso encinci.
Kakade ke, ezininzi iinkozi ziqulethe amaninzi amanqatha, kodwa kukho iikhalori ezingaphantsi kweeshizi. I-Cheese iyimvelaphi ye-calcium kunye ne-amino acid. I-linic acid inceda ukukhusela umngcipheko wokuphucula izifo zentliziyo, isifo sikashukela kunye nomhlaza.
Iingcebiso: I -fat fat-cheese inceda ukuqeda amanqatha angadingekile. Khetha ushizi, ushizi kunye nenkuni, ushizi ebusini beebhokhwe. Baya kutyundela ukutya kwakho, gcwalisa umzimba ngezinto eziyimfuneko kwaye ungalimazi lo mfanekiso.
Inyama ngumthombo weprotheni, izondlo zomzimba wethu zifuna umsebenzi oqhelekileyo, i-vitamin B12, isinyithi kunye ne-zinc. Ngoko ke, ukuba unquma ukutya kuphela inkukhu ebilisiwe kunye neentlanzi, ke kufuneka uhlolisise ngokukhetha kwakho.
Ukunquma okutsha, i-fillet, ephekwe kwi-oven, kunye nokuhlobisa ngohlobo lwemifuno kuya kuba semini yokutya emnandi okanye isidlo sakusihlwa.
Incomo : Musa ukufumba inyama ngotshani lwelanga, ingakumbi ibhotela ecocekileyo! Lungiselela i-steak okanye i-stew elula ngaphandle kokusebenzisa isithako esinobungozi. Ungadli inyama kunye namazambane, i-buckwheat, irayisi, i-pasta, isonka. Isisu sethu asinakudla ngokukhawuleza i-protein (inyama) kunye ne-carbohydrate (ihlose), ekhokelela kwiingxaki ngokugaya, ukuqhaqhaqhaqhaza, ukubetha kunye nokuguquka.
Ikhofi ithathwa njengesiphuzo esinomlilo, kuba iyakwandisa uxinzelelo lwe-artiutra, iholele ekungabikho kwemfucuza entliziyweni nangaphezulu. Ngokuqinisekileyo, kufuneka unike isiselo xa unempilo yeengxaki. Ngokwemvelo, musa ukusebenzisa kakubi ikhofi nokusela izindebe ezili-10 ngosuku. Kwezinye iimeko, isiselo sekofi sinceda!
Ikhofu ivuselela, iphucula ingcamango, iphakamisa imizwelo, inciphisa ukubonakaliswa kweempendulo ezichasayo. Ikomityi yekhofi kunye neqhekeza yetshokolethi emnyama inokuphakamisa isimo sengqondo, ukuphucula intlalontle yomntu.
Iingcebiso : ungaphuzi ikhofi kunye noshukela. Zama ngokukhawuleza ukuyeka "ukufa okumnandi" ngokunciphisa i-sweeteners. Ungaphuzi ngaphezulu kweekomityi ezimbini ngosuku. Yongeza kuphela i-cream e-fat fat.
Yiphutha lokuba amaqanda aqukethe ipesenti ephezulu ye-cholesterol. Ngokwahlukileyo, amaqanda enkukhu aqukethe amafutha azalisiweyo, ancedo kwimpilo yesisu senhliziyo. Amaqanda aphantsi kweekhalori, ziqulethe i-lutein, into ebalulekileyo kwamehlo ethu.
Iingcebiso : Yidla amaqanda aphekiweyo abilisiwe, amaqanda abilisiwe, i-omelette kunye nemifuno. Ungadli amaqanda angaphezu kwama-3 ngosuku.
Amantongomane angama-caloric, kodwa isixa esincinci sinceda kakhulu umzimba wethu. Amafutha ancedo kunye nezinto ezilandeleleneyo ezichaphazelekayo zinomphumo onenzuzo kumsebenzi wentliziyo, ncedisa ukuzalisa ngokukhawuleza.
Amantongomane anokuqulethe i-magnesium eninzi, enceda ukulwa nesifo sengqondo sokuqala, ukubhubhisa, intloko.
Iingcebiso : musa ukusebenzisa kakubi iisuthi. Kwanele ukuba ube neqela elincinci lamantongomane ngemini ukufumana zonke izinto eziyimfuneko ekusebenzeni ngokuqhelekileyo komzimba.
Imenyu yokondla imenyu kulabo abafuna ukunciphisa umzimba
Ukuhamba ... eFransi ... eParis
Iipropati zokutya zeemveliso zeebhaka
Ngaba uthanda ubudenge okanye uvakalelwa nje?
Utyando lwezonyango kunye nophando oluthandwa kakhulu
Kutheni kungcono ukuba ngumntu kunomfazi?
Umhluzi wenkukhu kunye namadaka
Isaladi kunye nenkukhu kunye nama-walnuts. Ukupheka kwetafile yonyaka omtsha
I-Escalope ye-veal kwi-sauce e-creamy
IHoroscope ye-Scorpio-Abafazi ngoFebruwari 2017